I-Ultrasonic Milling ye-Thermoelectrical Nano-Powders - Hielscher Ultrasound Technology
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukukhishwa kwe-ultrasonic kungasetshenziswa ngempumelelo ekwakhiweni kwe-nanoparticles ye-thermoelectric futhi kunekhono lokusebenzisa ukuphakama kwezinhlayiya.
Izinhlayiya ezinama-ultrasonically (isib. Bi2I-Te3-based alloy) yabonisa ukunciphisa ubukhulu obukhulu futhi wenza ama-nano-amaqhamuka angaphansi kuka-10μm.
Ngaphezu kwalokho, i-sonication ikhiqiza izinguquko ezibalulekile ze-surface morphology yezinhlayiya futhi ngaleyo ndlela ikwazi ukwenza umsebenzi we-micro-nano-particles.
Izinto zokwenziwa kwe-thermoelectric ziguqula amandla okushisa amandla kagesi asekelwe ku-Seebeck nasePeltier effect. Ngakho-ke kuzoba khona ukuguqula amandla noma ukulahlekelwa amandla okushisa ngokuphumelelayo kwizicelo ezikhiqizayo. Njengoba izinto zokwenziwa kwe-thermoelectric zingafakwa ezincwadini zamanje ezinjengebhethri ebhethri, ukupholisa kwe-thermoelectric eqinile-state, amadivaysi optoelectroni, isikhala, nokukhiqizwa kwamandla kagesi, ucwaningo kanye nembonini ifuna amasu alula futhi asheshayo ukukhiqiza imvelo-friendly, economical, futhi ephakeme izinga lokushisa-eliqinile le-nanoparticles ye-thermoelectric. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kanye ne-bottom-up synthesis (Sono-Crystallization) ziyizindlela ezithembisayo zokukhiqiza okusheshayo kwama-nanomaterial thermoelectric.
I-Ultrasonic Milling Equipment
Ukuze ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana ze-bismuth telluride (Bi2I-Te3), i-magnesium silicide (Isig2Si) kanye ne-silicon (Si) powder, uhlelo oluphakeme kakhulu lwe-ultrasonic I-UIP1000hdT (1kW, 20kHz) yasetshenziselwa ukusethwa kwe-beaker evuliwe. Ngoba zonke izilinganiso zokulinganisa zabekwa ku-140μm. Umkhumbi wesampuli ucolile emanzini okugeza, izinga lokushisa lilawulwa yi-couple-thermo-couple. Ngenxa yokunikezwa komkhumbi emkhunjini ovulekile, ukupholisa kwakusetshenziselwa ukuvimbela ukuqhuma kwezixazululo zokugaya (isibonelo, ethanol, butanol, noma amanzi).
(a) Umdwebo weSikimu wokusetha ukuhlola. (b) Amadivayisi okugaya ama-ultrasonic. umthombo: Marquez-Garcia et al. 2015.
I-UIP2000hdT ene-pressurizable flow flow reactor
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic nge-4h kuphela ka-Bi2I-Te3i-alloy isivele iveza inani elikhulu lama-nanoparticles ezinobukhulu obuphakathi kuka-150 no-400 nm. Ngaphandle kokunciphisa usayizi ohlangothini lwe-nano, i-sonication nayo yabangela ushintsho lwe-surface morphology. Izithombe ze-SEM esithombeni esingezansi b, c, no-d zikhombisa ukuthi izingxube ezibukhali zezinhlayiyana ngaphambi kokugaya i-ultrasonic ziye zaba bushelelezi futhi zizungezile ngemuva kokugaya ama-ultrasonic.
Ukusabalalisa usayizi wezinhlayiyana kanye nezithombe ze-SEM ze-alloy Bi2Te3-based ngaphambi nangemva kokukhishwa kwe-ultrasonic. a – Ukusabalalisa usayizi wezinhlamvu; b – Isithombe se-SEM ngaphambi kokukhishwa kwe-ultrasonic; c – Isithombe se-SEM ngemuva kokukhishwa kwe-ultrasonic nge-4 h; d – Isithombe se-SEM ngemuva kokukhishwa kwe-ultrasonic nge-8 h.
umthombo: Marquez-Garcia et al. 2015.
Ukunquma ukuthi ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana nokuguqulwa kwendawo kutholakala ngokukhethekile ngemishini yokukhiqiza i-ultrasonic, ukuhlolwa okufanayo kwaqhutshwa ngokusebenzisa i-high-energy ball mill. Imiphumela iboniswa kumdwebo 3. Kubonakala ukuthi 200-800 nm izinhlayiya zakhiwe ibhola lokugaya amahora angu-48 (izikhathi eziyi-12 ngaphezulu kunomshini we-ultrasonic). I-SEM ikhombisa ukuthi emaphethelweni abukhali we-Bi2I-Te3ama-particle -alloy ahlala engashintshi ngemuva kokugaya. Le miphumela ibonisa ukuthi izingqamuzana ezibushelelezi ziyizici eziyingqayizivele yokugaya i-ultrasonic. Ukusindisa isikhathi nge-ultrasonic milling (4 h vs 48 h ball milling) kuphawulekayo, futhi.
Ukusabalalisa usayizi we-particle kanye nezithombe ze-SEM ze-Mg2Si ngaphambi nangemva kokukhishwa kwe-ultrasonic. (a) Ukusabalalisa usayizi we-particle; (b) isithombe se-SEM ngaphambi kokukhishwa kwe-ultrasonic; (c) isithombe se-SEM ngemuva kokukhishwa kwe-ultrasonic ku-50% i-PVP-50% ne-EtOH nge-2 h.
UMarquez-Garcia et al. (2015) siphetha ngokuthi ukukhishwa kwe-ultrasonic kungadambisa uBy2I-Te3 futhi uMg2I-powder ibe yizinhlayiyana ezincane, ubukhulu bayo obuphakathi kuka-40 kuya ku-400 nm, okuphakamisa indlela ekhona yokukhiqiza izimboni ze-nanoparticles. Uma kuqhathaniswa ne-high-energy ball milling, ukukhishwa kwe-ultrasonic kunezici ezimbili eziyingqayizivele:
1. ukutholakala kwegesi lesayizi -zinhlayiyana ezihlukanisa izinhlayiya zangempela kulabo abakhiqizwa ukukhishwa kwe-ultrasonic; futhi
2. Izinguquko ezinkulu kwi-surface morphology zibonakala ngemuva kokukhishwa kwe-ultrasonic, okubonisa ukuthi kungenzeka ukuxhaphaza izinhlaka zezinhlayiyana.
Ukukhishwa kwe-ultrasonic yezinhlayiya ezilukhuni kudinga u-sonication ngaphansi kwengcindezi yokwenza cavitation ejulile. I-Sonication ngaphansi kwengcindezi ephakeme (okuthiwa i-manosonication) ikhulisa amandla we-shear nokucindezeleka kuma-particles.
Ukusethwa kwe-sonication okuqhubekayo okuqhubekayo kuvumela ukuphakama kwe-particle ephakeme (ukunamathiswa okunamathisela), okuthuthukisa imiphumela yokugaya kusukela ukukhishwa kwe-ultrasonic kusekelwe ekuhlanganyeleni kwe-particle.
Ukunikezwa kwe-Sonication ngendlela ehlelekile yokuhlelwa kabusha kuvumela ukuqinisekisa ukwelashwa okuhambisanayo kwazo zonke izinhlayiya ngakho-ke ukusabalalisa usayizi wezinhlayiyana ezincane kakhulu.
Inzuzo enkulu ye-milling ultrasonic yukuthi ubuchwepheshe bungasheshe buhlanganiswe ukukhiqizwa kwezinto ezinkulu-ukutholakala kwezentengiselwano, okunamandla okukhiqiza izimboni ze-ultrasonic kungabamba inani elifinyelela ku-10m3/ h.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Milling
Okusheshayo, okusindisa isikhathi
Ayikho imidiya ye-milling (ayikho ubuhlalu noma amaparele)
Izindleko zokutshala imali ephansi
Ukukhishwa kwe-ultrasonic kudinga imishini yamandla aphakeme e-ultrasonic. Ukuze kuqhutshwe amandla amakhulu okugcoba ama-cavitational, ama-amplitudes aphakeme nokucindezela kubalulekile. Hielscher Ultrasonics’ ama-processor ultrasonic ama-industriel angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes angafika ku-200μm angaqhutshwa kalula ngokuqhubekayo ku-24/7 ukusebenza. Nge-amplitudes ephakeme nakakhulu, i-sonotrode e-ultrasonic eyenziwe ngezifiso iyatholakala. Ngokuhambisana nama-reactors asebenzayo asebenzayo, i-cavitation enamandla kakhulu yenziwa ukuze izibopho ze-intermolecular zinganqotshwa futhi kube nemiphumela emihle yokugaya.
Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza komsebenzi we-24/7 emsebenzini obuthakathaka nasezindaweni ezinzima. Ukulawulwa kweDijidali nokude nokudatshulwa kwedatha okuzenzakalelayo ekhadini le-SD elizakhelwe ukuqinisekisa ukucubungula okucacile, ikhwalithi ye-reproducible futhi kuvumela ukuqiniswa kwenqubo.
Izinzuzo ze-Hielscher High Performance Ultrasonicators
Amaplitudes aphezulu kakhulu
inqubo eqhubekayo eqhubekayo
gcina futhi kulula ukusebenza
UMarquez-Garcia L., uWi W., uBomphrey JJ, uJarvis DJ, uMn G. (2015): Ukulungiswa kweNanoparticles ye-Thermoelectric Materials yi-Ultrasonic Milling. I-Journal of Electronic Materials 2015.
Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic ye-Polishing Agents (CMP)
Ultrasonically Intensified okungaguquki Umbhede sikhungo
Izinto zokwakhiwa kwe-thermoelectric zibonakala ngokubonisa umphumela we-thermoelectric kwifomu eqinile noma elula, esebenzayo. Umphumela we-thermoelectric ukhuluma ngezimo lapho ukuhluka kwezinga lokushisa kudala khona amandla kagesi noma amandla okugesi adala umehluko wokushisa. Lezi zenzakalo ziyaziwa ngokuthi umphumela we-Seebeck, ochaza ukuguqulwa kwezinga lokushisa kuze kube manje, umphumela wePeltier, ochaza ukuguqulwa kwamanje kuya ekushiseni, nomphumela we-Thomson, ochaza ukushisa okuqhubayo / ukupholisa. Zonke izinto zine impumulelo ye-nonzero ye-thermoelectric, kodwa ezintweni eziningi zokwakha kuncane kakhulu ukuze kube usizo. Kodwa-ke, izinto ezibiza izindleko ezibonisa ukuthi amandla asebenza ngokwanele okwakhiwa kwe-thermoelectric kanye nezinye izakhiwo ezidingekayo ukuze zibenze, zingasetshenziswa ezincwadini ezifana nokukhiqiza amandla kanye nesifriji. Okwamanje, i-bismuth telluride (Bi2I-Te3) lisetshenziselwa kakhulu umphumela wayo we-thermoelectric